ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 21 John
21:1 emva kwale, wabonisa uYesu waphinda wazibonakalisa kubafundi bakhe ngakuLwandle lwaseTibheriya. Kwaye ezibonakalisile ngale ndlela.
21:2 Ezi ndawonye: USimon Petros noTomas, ekuthiwa nguWele, noNataniyeli, owayevela eKana yelaseGalili, kunye noonyana bakaZebhedi, kunye nabanye ababini kubafundi bakhe.
21:3 Athi uSimon Petros kubo, "Ndiya kubambisa iintlanzi." Bathi kuye, "Kwaye kuhamba kunye nani." Waya akhwela emkhombeni. Kwaye ngobo busuku, ababamba nto.
21:4 Kodwa xa efika ekuseni, Sekusile, wema uYesu elunxwemeni. Kodwa abafundi babengaqondi ukuba nguYesu.
21:5 Waza uYesu wathi kubo, "Abantwana, ngaba unayo nayiphi na ukutya?"Bathi kuye, "Hayi."
21:6 Wathi kubo, "Wuphoseni umnatha ngecala lasekunene lomkhombe, kwaye uya kufumana ezinye. "Ngoko ke, bawukhuphe, kwaye ke; ababa saba nako ukuwutsala,, ngenxa yenkitha yeentlanzi.
21:7 ngoko ke, lo mfundi obethandwa nguYesu wathi kuPetros, "YiNkosi." Simon Petros, Akuba ke akuva ukuba yiNkosi, wabhinqa ingubo yakhe ngeenxa zonke kuye, (ngokuba ze) waza waziphosa elwandle.
21:8 Kwafika nabanye abafundi ngesikhephe, (ngokuba bebengekude kude elizweni, ziikubhite kuphela malunga ezimakhulu mabini) bewuzizilizisa umnatha kunye nentlanzi.
21:9 ke, xa sehla ukuya ezweni babona avuthayo bezilungiselele, kunye nentlanzi sele ibekwe ngaphezu kwazo, kunye nesonka.
21:10 UYesu wathi kubo, "Zisani kwezo ntlanzi nizibambise ngokunje."
21:11 Simon Petros, ekhasa kwaye oyizobe umnatha: uzele ziintlanzi ezinkulu, ezilikhulu elinamashumi amahlanu anantathu kubo. Kwaye nangona babebaninzi kangaka, umnatha awuqhaqhekanga.
21:12 UYesu wathi kubo, "Sondelani nidle." Kwaye akukho namnye kubo wayehleli phantsi ukuba badle nesibindi sokumbuza, "Ungubani?"Kuba babengazi ukuba yiNkosi.
21:13 Yaye uYesu wasondela, waza wathatha isonka, waza wabanika, kwaye ngokufanayo kunye nentlanzi.
21:14 Oku sekukokwesithathu ezibonakalalisa uYesu wabonakala kubafundi bakhe, emva kokuba evusiwe kwabafileyo.
21:15 ke, bakuba ubedla, UYesu wathi kuSimon Petros, "Simon, unyana kaYohane, uyandithanda na ngaphezu kwaba?"Wathi kuye, "Ewe, Nkosi, uyazi ukuba ndiyakuthanda. "Wathi kuye, "Yondla amatakane am."
21:16 Wabuya wathi kuye: "Simon, unyana kaYohane, uyandithanda?"Wathi kuye, "Ewe, Nkosi, uyazi ukuba ndiyakuthanda. "Wathi kuye, "Yondla amatakane am."
21:17 Wathi kuye okwesithathu, "Simon, unyana kaYohane, uyandithanda?"UPetros waba buhlungu kakhulu ukuba ucele kuye okwesithathu, "Uyandithanda?"Waza ke wathi kuye: "Nkosi, wazi zonke izinto. Uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. "Wathi kuye, "Yondla amatakane am.
21:18 Amen, amen, Ndithi kuwe, xa wawusemncinane, wena abhinqe wena wahamba apho uthanda ukuya khona. Kodwa xa sele bebadala, uya elula izandla zakho, ubhinqiswe ngomnye wena ndikuse apho awufuni ukuya. "
21:19 Wakutsho ke oku, ukuba abonise ukuba kukufa kuni na abeya kuzukisa uThixo. Ke kaloku, wathi le, Wathi yena kuye, "Ndilandele."
21:20 Peter, siguquke, wabona laa mfundi wayethandwa nguYesu elandela, lowo naye wacinezela esifubeni bakhe esidlweni, waza wathi, "Nkosi, ngubani na oya kunginizelwa?"
21:21 ngoko ke, xa uPetros bambona, wathi kuYesu, "Nkosi, kodwa kuthiwani ngaye lo?"
21:22 UYesu wathi kuye: "Ukuba ndifuna abekho ndide ndibuye, iyini na loo nto kuwe? Landela mna wena. "
21:23 ngoko ke, ilizwi waphuma phakathi kubazalwana, ukuba loo mfundi akayi kufa. Kodwa uYesu wayengatshongo kuye ukuba akayi kufa, kodwa kuphela, "Ukuba ndifuna abekho ndide ndibuye, iyini na loo nto kuwe?"
21:24 Nguye lo umfundi lowo unika ubungqina ngezi zinto, wazibhala ezi zinto. Kwaye siyazi ukuba ubungqina bakhe buyinene.
21:25 Ngoku kukho ke nezinye izinto ezininzi awazenzayo uYesu, leyo, ukuba nganye kwezi yabhalwa phantsi, izwe ngokwalo, Ndifanele ukuba, wayeza kuba nako belingenakuziqulatha iincwadi ebeziya kubhalwa.